LIFAAQA NOOCYADA - Geofumadas
Boggani wuxuu ku jiraa dhismaha, isagoo eegaya mawduucyada ugu badan ee loo isticmaalo blogga; inkasta oo boostadan aad arki karto wuxuu taxaa dhammaan barnaamijyada lagu kala hadlo Geofumadas.
AutoCAD 3D Madani
Tricks oo leh AutoCAD
Tababar iyo buugag
Waxyaabaha kale ee AutoDesk
Sida loo sameeyo ArcGIS
Isbarbar dhig dadka kale
Ku saabsan ESRI
Soo rog Sawirada
Xaqiijinta Google Earth
Tricks oo leh Microstation
Waxyaabaha kale ee Bentley
Ku saabsan Microstation
Ku saabsan Manifold GIS
Qoraallada halka lagu xusay
Sida loo sameeyo gvSIG
Ku saabsan gvSIG
Tababar iyo siminaaro
Tricks oo leh teknoolojiyada
Kor u qaadista iyo qalabka
GPS iyo QALABKA
Baadhitaan la adeegsanayo AutoCAD
Muuqaalka iyo GIS
Buug gacmeedka iyo koorsooyinka
Dib u eegida GPS
Isticmaalka GPS ee mobile
Buugga iyo koorsooyinka
15 Jawaabo ah "QEYBTA TIRADA"
Isku day RENOT
Anonymous isagu wuxuu leeyahay:
Habeen wanaagsan, waxaad iigu sheegi kartaa meesha aan ka heli karo lakabyada webiyada iyo waddooyinka Honduras. Ama waxay ka yahiin boggaga qatarta ah iyo sidoo kale geoport of ICF.
adag in. Waxay noqon karaan meel kasta oo dalka ka mid ah.
WEYDII, AHAY aan SAMEEYEEN ARDAYDA IYO DHAQANKA GEOMATICA, ME ku arzaaqnayna wax sawiro anteenada laga GOOGLE dunida, LAAKIIN OGTAHAY MEESHA, IN MARKA LAGU DARO MEXICO, AS WAXAAD KA HELI KARTAA MEESHA?
Héctor Donato Montañez isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar, 2017 at
Waxaan rabaa inaan ku ogeysiiyo inaad si khalad ah u qaadatay marin guud oo gaar ah oo kuyaala Calle Pedro Echagüe Oeste N ° 149 taasna waxay kulaxiriirtaa Calle Sarmiento Norte halkaas oo ay ku taalo albaab qarsoodi ah, goobtani waxay kutaala magaalada San Juan - Capital ee Gobolka San Juan, Jamhuuriyadda Argentina. Xaqiiqda ah inaysan ku lahayn albaab ku yaal wadada Pedro Echagüe ma muujineyso inay dadweynaha tahay. Sidaa darteed, waxaan codsanayaa in taxaddarka lagama maarmaanka ah marka hore la qaado si loo ogaado haddii waxa aan sheegayo ay run yihiin iyo haddii ay tahay, waxaan codsanayaa in sawirrada wareegga la tirtiro.
Iyada oo leh muunad exel ah. Qeybta kore waa isku xirka.
Alfredo isagu wuxuu leeyahay:
sida loo beddelo liiska joornaalka jajab tobanlayaasha si ay u macaamilaan
Waa inaad noqotaa mid gaar ah.
Guud ahaan waxaa lagaa rabaa inaad ku meeleyso nidaamka isku-duwidda,
markaa waa inaad u wareejisaa meesha loo yaqaan 'reference point', oo u beddel haddii loo baahdo.
Warqad na soo qor (at) geofumadas. waxaanan si faahfaahsan u sharxi doonaa.
Waxaan refernciar karaa sida file DXF aan iniinahoodu ku ah isku duwaha in jir ah duwo? Waxaan qabaa in la MicroStation waa fácil..pero ka badan ma jecla ..
Waxaan haystaa su'aal, sidaan sameeyo si aan u ogaado qiimaha khaldan ee qaldan marka la eego qiimaha xajmiga heerka.
Haddii aad ka hadlaysid Sharciga Honduran:
- Waxay u maleynayaan inay bilaabayaan sahaminta shilalka magaalooyinka laba sano gudahood: Waa maxay qiimaha ay ku dabaqayaan? Haddii ay qiimeeyaan oo aysan ku heshiin, waxay ku qasbanaan lahaayeen inay codsadaan 100%.
Maxay tahay in is ogow of waa diidmo suurto galka ah ee Maxkamadda Sare ee hantidhawrka, haddii aadan caddayn qiimaha ayaa soo gabagabeeyay, iyaga u baahan tahay si ay u ururiyaan qiimaha ay sabab u tahay 100%.
Heshiiska ayaa door ka ciyaara, sidaa darteed saameyntu ma aha mid aad u sarreeysa, marka cadastarku farsameeyo.
Qormada kale, waa nooc nooca qiyamka ah ee ay tahay mid ay sheeganayaan? Miyuu yahay dhismayaal, qiimo jaban? Miyuu ku jiraa qiyamka dhulka magaalada? Ma waxaa ku jira qiimaha dhulka miyiga iyo dalagyada joogtada ah?
Haddii ay yihiin buuggaag cusub oo diyaarsan, oo leh qiimeyaal cusbooneysiin ah. Iyaga oo loo adeegsado 100% waxay yeelaneysaa saameyn xun, sababtoo ah dadka, haddii loo isticmaalo kaliya bixinta bixinta, ama si fudud waligood aysan bixin, waxay dareemi doonaan dharbaaxo xoogan. Tani halkii ay ka faa'iideysan laheyd, waxay kordhin doontaa waxa caadiga ah, maxaa yeelay dadku waxay u imaan doonaan degmada oo keliya si ay u arkaan goorta ay tahay inay bixiyaan, iyo markay ogaadaan qiimaha ay kusii dhowaan doonto.
Marka, waxa loo baahan yahay in la habeeyo waa lama huraan. Labaduba inay taageeraan TSC kahor howsha golaha furan, iyo sidoo kale in la yareeyo saameynta farsamada.
Yaredi Harobi Mejia Paredes isagu wuxuu leeyahay:
Degmooyinka qaar waxaan haynaa buugaagta liiska shanta sano ee 2015-2019, si kastaba ha ahaatee ma jiro sahamin farsamo oo Urban, way saxsan tahay waaxda Cadastre inay bilawdo habraacyada heshiisyada qiimayaashan ama waxa ay noqon doonto tilaabada ugufiican in la qaado, Miyiga waxaa jira sida 30% sahanka farsamada, waxa la sameeyo xaalada noocaas ah.
LUIS ARMANDO ROJAS isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan, oo ah shirkadda aan ka shaqeeyo, ayaa xiiseyneysa helitaanka 'drone', oo leh kamarado fara badan iyo sawirro sawir leh, oo ay ku jiraan software-ka qorsheynta duulista iyo falanqaynta sawirrada, oo u oggolaanaya kormeerka dalagyada iyo xoolaha iyada oo loo marayo isticmaalka UAV To in la ogaado waqtiga dhabta ah xaaladda beero kaladuwan iyada oo ujeedkeedu yahay in la wanaajiyo wax qabadkooda, qiimeynta xakamaynta cayayaanka iyo noocyada iyo tayada waraabka.
Waxaan jeclaan lahaa in hindisahaaga heysto
SIDA LUIS isagu wuxuu leeyahay:
Oktoobar, 2013 at
Waxay leeyihiin caadiga ah in tilmaamaysaa CAD ah barbaro u polylines isgoyska line ama AutoCAD ama MicroStation midkood.
Gacuz isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan soosaaraa google hearth kml oo leh iskuduwaha utm (qodobbada 20) iyo aqoonsi isku-duwaane kasta, ID8L980G 20.408165 -99.36207333 (aqoonsiga, latitude, dhaadheer), faylka kml waxaa laga soo saaray utm 8L980G zone 14 Q 462223.62 m E 2256691.52 Laakiin markii aan u beddelo 'dwg autocad' waxay i siineysaa laba xog oo kala duwan oo ah dhinaca aqoonsiga iyo dhinaca kale waxay i siineysaa qodobbada, maxaa dhacaya ??????